काजोलले शाहरुखसँग काम गर्न नमानेकी हुन् ? « THULOPARDA.COM
काजोलले शाहरुखसँग काम गर्न नमानेकी हुन् ?
बलिउडका किंग शाहरुख खानका फ्यानहरू लामो समयदेखि चलचित्रको पर्खाइमा छन् । शाहरुख चाँडै आफ्नो आगामी चलचित्र घोषणा गर्नेछन् पनि भनियो । उनका जन्मदिनदेखि नै फ्यानहरू यस समाचार पर्खिरहेका छन् । यसबीच, शाहरुखको मिल्ने साथी तथा अभिनेत्री काजोलले उनीसँग काम गर्न अस्वीकार गरेको खबर बाहिरिएको छ ।
हालै काजोललाई शाहरुख खानसँग चलचित्रको प्रस्ताव दिइएको समाचार बाहिरिएको थियो, जसका लागि काजोलले अस्विकृत गरिन् । एकातिर प्रशंसकहरूले शाहरुख र काजोलको जोडी मन पराउँछन्, त्यसमा उनले अस्वीकार गर्नु आश्चर्यजनक भएको छ । तर, यस समाचारको काजोलले खण्डन गरेकी छन् ।
काजोल आफैंले भर्खरै एक अन्तर्वार्तामा यस्तो केही नभएको स्पष्ट पारेकी छन् । उनले शाहरुखसँग काम गर्ने कुनै प्रस्ताव पाइनन् । उनले यी खबरहरुलाई गलत भएको बताइन् । शाहरुख खान र काजोल अन्तिम पटक चलचित्र ‘दिलवाले’ मा सँगै देखाएका थिए । दर्शकले दुबैको जोडी मन पराउँछन् ।
चलचित्र ‘दिलवाले दुल्हनियां ले जाएंगे’ आज पनि प्रत्येक दिन मुम्बईको एक थिएटरमा प्रदर्शन भैरहेको छ । शाहरुखको पछिल्लो चलचित्र ‘जीरो’ थियो, जुन नराम्रोसँग फ्लप भयो । यसपछि शाहरुखले विश्राम लिए तर अब फ्यानहरूले उनलाई नयाँ चलचित्र बनाउन अनुरोध गरिरहेका छन् । कति फ्यानले त चाँडै चलचित्र घोषणा नगरे आत्महत्या गर्ने धम्की समेत दिएका छन् ।
सलमानसँग काम गर्न ऐश्वर्याका यी सर्त
बलिउड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन र अभिनेता सलमान खानको प्रेम प्रशंग बलिउडमा निकै चर्चामा रहने
कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि प्रभासको ४ करोड सहयोग
‘बाहुबली’ फेम्ड अभिनेता प्रभासले कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि ठूलो रकम सहयोग गरेका छन् । उनले
ऋतिक रोशन र सुजैन खानको सम्बन्ध बिच्छेद भएको धेरै समय भयो तर यि दुईको मित्रता